Adeeg Bogga Adeegga Maqalka ah ee lagu sharraxay Sempt
A shaqadu waa in ay nuqul ka sameyso bogga dibedda ah oo ay isticmaalaan. Qoraalka boggaga waxaa ku jira shaqooyin isku mid ah sida kuwa guur guura. Labada barnaamijyadan waxay ka shaqeeyaan shabakadaha internetka - hat for mens online. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xusuusto in kuwa gurguurtan shabakadda ay mas'uul ka yihiin daboolista shabakada oo dhan, laakiin ujeedada ugu weyn ee xoqista bogaggu waa inay bartilmaameedsadaan shabakadaha isticmaalaha.
Ujeeddada barnaamijka ujeedada mawduucyada ka soo baxa bogga kale oo leh hadafka koowaad ee soo saaridda dakhliga, badanaa iyada oo loo marayo iibinta xogta isticmaalaha iyo xayaysiinta. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in adeeg bixiyaha duugoobay uu adeegsado adeegga kormeerka loogu talagalay boggaga internetka ee bartilmaameedka ah isla markaasna hubiya in qalabkii burburinta had iyo jeer la dayactiro.
Sawirada bogagga waxay soo dejin kartaa nooc kasta oo xog ah,. Awoodgani waxay ku xiran tahay habka isticmaalka iyo barnaamijka laftiisa. Ka dib markii la soo dejiyo, barnaamijku wuxuu daba socdaa xidhiidhada kale ee dibedda ah si loogu sii daayo. Nidaamku wuxuu badbaadin karaa noocyada faylka la duubay qaabab kala duwan sida HTML, CSV ama faylasha XML. Boodhadhka ugu caansan ee caanka ah wuxuu leeyahay awood dheeri ah si loo suurtageliyo isticmaalaha in uu dhoofiyo feylasha si loo helo xogta ku habboon.
Tani waa farsamooyin sharci darro ah oo xadidaya asalka dhabta ah ee shabakad loo yaqaan ama sharci ah isla markaana soo dhejinaya isla bogga kale iyada oo aan la helin oggolaanshaha ku habboon mulkiilaha mulkiilaha. Ujeedada kelidii ah waa in laga dhaafo waxyaabaha la soo xaday sida asalka dhabta ah, iyada oo ku fashilantay in ay u qalantaa milkiilaha.
Goobidda bogagga waxay leedahay shaqooyin badan; kuwa ugu caansan waa qadarin iyo xadid xog ah. Intaa waxaa dheer, waxay fududeeyaa dadka isticmaala inay ku daraan macluumaadka xoqidda bogagga kale. Website ah oo ka kooban mawduucyada la xoqay boggaga internetka waxaa loo yaqaannaa barta shabakadda .
Dhowr goobood oo wax lagu xoqdo ayaa lagu marti qaaday aduunka oo idil. Waqtigii hore, qaar ka mid ah goobaha wax lagu xoqdo ayaa la weydiistay in ay iska tuuraan wax copyrighted ah, laakiin halkii ay ku soo jiidan lahaayeen, waxay kaliya uun baabi'i doonaan ama beddeli karaan domains.
Tusaalooyinka sawirada goobta
World Wide Webku waxay had iyo jeer kobcisaa tayada tayada iyo xogta, taas oo keeneysa baahida loo qabo xogta xiisaha leh si loo raadsado goobo kale oo laga soosaaro xogta shabakadda. Horumarinta tiknoolajiyadu waxay fududeeyeen horumarinta noocyada kala duwan ee waraaqaha goobta si ay u helaan xogta laga helo bogga la door biday.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo waraaqo ah oo ku yaala shabakada maanta. Qaar ka mid ah joornaalada goobaha ugu fiican ee maanta laga heli karo suuqa ayaa waxaa ka mid ah Wget, Warshad, Wareegga Macmiilka, Roodhadhka Goynta, Webka Wareegga Korriinka Korriinka, Spinn3r, ParseHub, Fminer, iwm.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira habab kale oo ah meesha laga jarayo . Waxay ka mid yihiin abuuritaanka mashiinno raadin iyo soo bandhigid qashin ka mid ah SERPS mid ka mid ah, ka qaadista bog ka website ah oo dib u habeyn lagu sameeynayo si loo abuuro buug khubaro ah oo shakhsiyeed, helitaanka habka kaydka oo laga helo hal bog website, isla markaana muujinaya isku mid kale.